ဘားကမ့်ရန်ကုန် - ဝီကီပီးဒီးယား
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဘားကမ့်
ဘားကမ့်ဆိုသည်မှာ သမာရိုးကျ ပြုလုပ်နေကျ နည်းပညာ ဟောပြောပွဲပုံစံမှ ခွဲထွက်ပြီး လူအများ စုပေါင်းကျင်းပသော အသိပညာမျှဝေနိုင်သော လွတ်လပ်သည့်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဘားကမ့်တွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီက မိမိတို့ သိရှိထားသမျှသော အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကို ဆွေးနွေးမှုပုံစံဖြင့် အပြန်အလှန် တင်ပြနိုင်သည်။ ဘားကမ့်သည် ပွင့်လင်း (Open) သည်။ မည်သူမဆို တက်ရောက်လာသူများကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ဟောပြောနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အချိန်ဇယားကပ်ထားသော ဘုတ်ပေါ်တွင် မိမိဟောပြောမည့် ခေါင်းစဉ်ကို သွားကပ်ထားနိုင်သည်။ ဘားကမ့်ကို ဦးဆောင်သူ (Organizer) ဟူ၍ သီးသန့်မရှိဘဲ ကျင်းပမည့် နယ်မြေဒေသမှ ဘားကမ့်ပြုလုပ်ချင်သူ (Barcamper) များနှင့် တက်ရောက်မည့်သူများက စုပေါင်းကျင်းပကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘားကမ့်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် နယ်မြေဒေသ အသီးသီးမှ ကိုယ့်လို ဝါသနာတူများ အချင်းချင်း ပိုမိုရင်းနှီးလာစေနိုင်သည်။
အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ဘားကမ့်ရန်ကုန် ၂၀၁၂ တွင် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားနေစဉ်
မြန်မာပြည်တွင် ဘားကမ့်လုပ်မည့် ကိစ္စကို ကြိုးပမ်းကြသူများ ယခင်က အများအပြား ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် အကြောင်းကြောင်းသော အခက်အခဲကြောင့် လုပ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ကြပါ။ ယခုတကြိမ် ဘားကမ့်ပြုလုပ်ရန် အိုင်ဒီယာကို အလွတ်တန်း အိုင်တီသမားများမှ စတင် အကြံပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ Barcamp Myanmar Archived 25 June 2011 at the Wayback Machine. ဆိုသော ဒိုမိန်းကို ၂၈.၇.၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘားကမ့် ၂၀၀၉ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေတုန်းမှာပင် MCPA အမှုဆောင်တစ်ဦးမှ ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် Facebook စာမျက်နှာတွင် MCPA မှ ဦးဆောင်ကာ ပြုလုပ်ရန် လျာထားကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဘားကမ့်ပြုလုပ်နေကျ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပညာရှင်များ မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်ကာ ၎င်းတို့ အမှုဆောင်များဖြင့် တွေ့ဆုံသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်ခြင်း တူညီသော ကြောင့် အလွတ်တန်း အိုင်တီသမားများက ၎င်းတို့ MCPA နှင့်ပူးပေါင်း ၍ ပြုလုပ်လို ကြောင်း ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ဘားကမ့်ကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ နောက်ခံပြု၍ ကျင်းပပေးခြင်းမျိုး မရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ မတူညီသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ပူးပေါင်းရန် သဘောတူခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘားကမ့်၏ သဘောသဘာဝကို လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃ရက်နှင့် ၄ရက်တွင် ကျင်းပသော ဘားကမ့်ဖနွမ်းပင် Archived 16 December 2008 at the Wayback Machine. သို့ MCPA ၏ အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သော ညီလင်းဆက်နှင့် ပြင်ပ အလွတ်တန်း အိုင်တီသမားများ ဖြစ်ကြသော ကိုအောင်မျိုးလွင်၊ ဇော်မျိုးထွန်းတို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် MCPA ၏ အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သော ဦးသောင်းစုငြိမ်းမှ Barcamp Yangon ဒိုမိန်းကို ၁၅.၉.၂၀၀၉ ရက်နေ့တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဘားကမ့် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များတွေ့ဆုံခြင်း ပထမ အကြိမ် ကို ဒီဇင်ဘာလ ၃ရက်၊ ၂၀၀၉ ရက်နေ့တွင် လပြည့်ဝန်းပလာဇာအောက်ထပ်ရှိ Aroma Cafe တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကော်မတီဝင်များ တွေ့ဆုံပွဲကို Aroma Cafe ဆိုင်တွင်ပင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ၎င်းအစည်းအဝေးတွင်ပင် ကော်မတီဝင်များ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းအလိုက် အဖွဲ့ခွဲများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဘားကမ့်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၀-ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ရက်နှင့် ၂၄ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဘားကမ့်ရန်ကုန်ပွဲသို့ ပြည်ပမှ နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင် ခြောက်ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှ တက်ရောက်သူများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၃၀၀၀ (သုံးထောင်) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အကြိမ် ဘားကမ့်ပွဲသည် နိုင်ငံတကာတွင် တက်ရောက်သူ အများဆုံး ပွဲတစ်ပွဲ အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ဘားကမ့်ရန်ကုန်ကို ၂၀၁၁-ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ရက်နှင့် ၂၀ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။
တတိယအကြိမ် ဘားကမ့်ရန်ကုန်ကို ၂၀၁၂-ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်နှင့် ၁၂ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။
စတုတ္ထအကြိမ် ဘားကမ့်ရန်ကုန်ကို ၂၀၁၃-ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နှင့် ၂၀ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘားကမ့်ရန်ကုန်&oldid=694723" မှ ရယူရန်